ဇြန္လ 3, 2019
credit - အ National.ae
ကျွန်ုပ်တို့၏အံ့သြဖွယ်ဒူဘိုင်းကမ္ဘာ့နိမ့်ဆုံးရာဇဝတ်မှုနှုန်းများထဲမှရှိပြီး, 2018 အတွက်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အဋ္ဌမ-လုံခြုံဆုံးမြို့အဆင့်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသည်။ လုံခြုံရေးစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များစည်းမျဉ်းအေဂျင်စီခြောက်လအမျိုးအစားသို့ပြစ်မှုများခွဲခြား။ ဤရွေ့ကားရာဇဝတ်မှုများကိုခိုးမှု, အတင်းအဓမ္မလုယူခြင်း, ပြည်တွင်းဖောက်ထွင်း, လိမ်လည်မှု, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာချေမှုန်းရေးနှင့်အလွဲသုံးစားမှုနှင့်ရာဇဝတ်မှုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများပါဝင်သည်။
ပင်လယ်ကွေ့သတင်းများနှုန်းအဖြစ်, ဒူဘိုင်းရဲကဒူဘိုင်းအတွက်ရာဇဝတ်မှု 15 စဉ်အတွင်း 2017% အထိလျှော့ချကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ သို့သော်မူးယစ်ဆေးစစ်ဆင်ရေး၏အမှုများကိုရှစ်ရာခိုင်နှုန်းတိုးတက်လာခဲ့သည်။ ဗိုလ်မှူးချုပ်အဗ္ဗဒူလာ Khalifa Al-ရွှင်လန်းသော, တပ်မှူး-In-ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဒူဘိုင်းရဲ, ပြစ်မှုဆိုင်ရာအမှုများကို၏ 86% ဖြေရှင်းနိုင်သောအင်အားစုချီးကျူးလိုက်ပါတယ်။
2020 အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ရဲတပ်ဖွဲ့အင်အား '' ကမ္ဘာပေါ်မှာအလွန်အဆင့်မြင့်ရဲကိုမော်တော်ယာဉ်နှင့်အတူ '' သင်္ဘောတက် beefs - ကျနော်တို့ BEAST MODE ယခုများမှာ! အဆိုပါအကြီးအကျယ် updated SUV ကားသစ်တစ်ခု, ရန်လိုကြည့်ခြင်းနှင့်ရှေ့ဆောင်မျက်နှာအသိအမှတ်ပြုမှု software ကိုတပ်ဆင်ထား!
credit - အဆိုပါ National.ae
မူးယစ်ဆေး-related အမှုပေါင်း drop
မူးယစ်ဆေးဝါးအမှုပေါင်းလည်း5အတွက် 15 ဆင်း 100,000 ထံမှ 14.3 လူဦးရေနှုန်း, အတိတ် 2017 နှစ်အတွင်းကျဆင်းသွားပြီ, လူကုန်ကူးမှုပြစ်မှုစဉ် 0.2 အတွက် 2013 မှ 0.1 အတွက် 2017 ထံမှကျဆင်းနေ, ကမ်ဘာပျေါမှာနိမ့်ဆုံးနှုန်းမှတ်တမ်းတင်ထားသောသိရသည်။
ထိုကဲ့သို့သောစွန့်ပစ်အိမ်များနှင့်ကားများအဖြစ် - - ဒါဟာ ပတ်သက်. စော်ဘွားများနှင့်အစီရင်ခံစာန်းကျင်အယ်လ် Mansouri ဒူဘိုင်းရဲများကဟော့စပေါ့စောင့်ကြည့်နှင့်လုံခြုံရေးကွာဟချက် detect လုပ်ဖို့အထူးလုံခြုံရေးအဖွဲ့များမှတပါး, ထို Anti-ရာဇဝတ်မှုဌာနတည်ထောင်ရန်ယူအေအီးအတွက်ပထမဦးဆုံးအင်အားစုတွေထဲကတစ်ခုကြောင်းမှတ်ချက်ပြု ။ ရဲထို့နောက်ထိုအစက်အပြောက်အတွက်ပြစ်မှုမဆိုကြင်နာကာကွယ်တားဆီးဖို့အရေးယူ။
ယင်းစော်ဘွားရဲ့လျင်မြန်စွာတိုးချဲ့နေသော်လည်းဒူဘိုင်းရဲကလူကြီးမင်းတွေဖြစ်တဲ့မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆိုက်ဘာပြစ်မှုတွေကအဖြစ်ယူအေအီးကိုထိခိုက်ကြောင်းဖြင့်နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုများကို, ကာကွယ်တားဆီးဖို့လုပ်ဆောင်နေသည်။ တိုင်းပြည်အတွက်ဥပဒေရေးရာဥပဒေပြဌာန်းအယ်လ် Mansouri ဖော်ပြထား၎င်း၏လုံခြုံရေးဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အတူလက်ကမြင်းကြိုးစားတဲ့သူတွေကိုတစ်ဦးအဟန့်အဖြစ်သရုပ်ဆောင်, တကမ္ဘာလုံးအင်အားအကောင်းဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဒူဘိုင်းရဲများက hoverbikes စမ်းသပ်မောင်း
အဆိုပါပျံဆိုင်ကယ်ရုရှားကုမ္ပဏီကလုပ်နေကြတယ် Hoversurf ။ အဆိုပါ hoverbike ရဲတပ်ဖွဲ့မော်နီတာအသွားအလာနှင့်ကြီးမားသောဒေသများတွင်ပါစေနှင့်လျင်မြန်စွာအရေးပေါ်အခြေအနေရလိမ့်မယ်။ ဒါဟာတဦးတည်းထိုင်နှင့် 30-40 မိနစ်ပျံသန်းနိုင်သည်။
အဆိုပါစက်ဘီးကိုလည်းတိုက်ရိုက်ဗွီဒီယိုကိုအစာကျွေးခြင်းပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ ဒူဘိုင်းရဲများကသူတို့ကအနာဂတ်၌ပင်မြင့်မားပျံသန်းနိုင်ထင်သော်လည်းဆိုင်ကယ်ပေါ်မှာ 20-ခြေလျင်ပျံသန်းန့်သတ်ချက်ထားလေ၏။ သူတို့ကလာမယ့်နှစ်နှစ်အတွင်း hoverbikes ကိုစတင်သုံးစွဲဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
ဒါဟာတစ်ခုကို hoverbikes အပေါ်ရဲတစ်ဦးလေယာဉ်ရဲ့ရဲ့တစ်ဦးငှက်ရဲ့! ဒူဘိုင်းရဲ hoverbikes စမ်းသပ်မောင်း။
ကျနော်တို့ပြစ်မှုဆိုင်ရာအမှုများကိုနီးပါး 90% ဖြေရှင်းကြသည်!
ဒူဘိုင်းကမ်ဘာပျေါမှာနိမ့်ဆုံးရာဇဝတ်မှုနှုန်းများထဲမှရှိပါတယ်။ လုံခြုံရေးအေဂျင်စီစည်းမျဉ်းအခွင့်အာဏာကိုခြောက်အမျိုးအစားသို့ပြစ်မှုများခွဲခြား။ ဤရွေ့ကားရာဇဝတ်မှုများကိုခိုးမှု, အတင်းအဓမ္မလုယူခြင်း, ပြည်တွင်းဖောက်ထွင်း, လိမ်လည်မှု, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာချေမှုန်းရေးနှင့်အလွဲသုံးစားမှုနှင့်ရာဇဝတ်မှုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများပါဝင်သည်။
Gulf News နှုန်းအဖြစ်, ဒူဘိုင်းရဲကဒူဘိုင်းအတွက်ရာဇဝတ်မှုပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကထက် 15% အထိလျှော့ချကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ သို့သော် 8% ဗိုလ်မှူးချုပ်အဗ္ဗဒူလာ Khalifa Al-ရွှင်လန်းသော, တပ်မှူး-In-ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဒူဘိုင်းရဲတိုးမူးယစ်ဆေးစစ်ဆင်ရေး၏အမှုများ, ပြစ်မှုဆိုင်ရာအမှုများရာခိုင်နှုန်း 86 ဖြေရှင်းနိုင်သောအင်အားစုချီးကျူးလိုက်ပါတယ်။ ရဲအရာရှိများကျနော်တို့ကရာဇဝတ်ကောင်နောက်ကွယ်မှအလွန်ဖြစ်ကြပြီးကြောင့်ရာဇဝတ်မှုနှုန်းမှာအလျင်အမြန်လျော့ကျလာကြောင်းပြောသည်။ Khalij Times သတင်းစာသတင်းစာနှုန်းအတိုင်း, လေးနက်အကြမ်းဖက်ရာဇဝတ်မှုနှုန်းသည်လွန်ခဲ့သည့်ငါးနှစ်အတွင်း% 38 လျှော့ချခဲ့သည်။
ဒူဘိုင်းအတွက်လုံခြုံရေးအာဏာပိုင်များ 24h အလုပ်လုပ်ကြသည်!
အဆိုပါဆောင်းပါးတွင် Amardeep Brar နေဖြင့်ဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီစရာဘို့ကျမ်းစာ၌ရေးထားခဲ့ပါတယ်။ LinkedIn ပေါ်မှာငါနှင့်အတူချိတ်ဆက်ပေးပါ။
ငါ့ကိုကိရိယာများအား HR Solutions, အဓိကအားဖြင့်အရည်အသွေးမြင့် & ၎င်း၏ဖောက်သည်န်ဆောင်မှုများအချိန်မီပေးပို့အာရုံစိုက်နှင့်အတူခြေဖြင့်နင်းထူထောင်ကြောင်းလူငယ်တစ်စီးပွားစွမ်းဆောင်ရှင်များနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လူအင်အားဖြေရှင်းချက်ကုမ္ပဏီမိတ်ဆက်ပေးခွင့်ပြုရန်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီတစ်ခုတို့က April'2013 အတွက်ထည့်သွင်းခဲ့ပါတယ် ်ထမ်းခေါ်ယူမှုအတွက်ဆယ်စုနှစ်၏အတှေ့အကွုံရှိခြင်းပညာရှင်များ၏အသင်း, မီဒီယာနှင့်ပညာရေးစက်မှုလက်မှု။ ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ရှိဝန်ဆောင်မှုများကိုအမြဲတမ်း်ထမ်းခေါ်ယူမှု, ယာယီ Staffing, လစာန်ဆောင်မှုများ, ကျောင်းပရဝုဏ်နေရာထားရှိများနှင့်နွေရာသီ-ဆောင်းရာသီ Internship များပါဝင်သည်။ ကျနော်တို့ပန်အိန္ဒိယတွင်ဤဝန်ဆောင်မှုများပေး။ ကျနော်တို့အောင်မြင်မှုသာထိပ်မှာအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးသော်လည်းအရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှအဘယ်သူသည်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတလျှောက်လုံးအများအပြားမဟုတ်ကြောင်းယုံကြည်; ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အဖွဲ့အစည်းအားလုံးအဆင့်ဆင့်ကိုဖြတ်ပြီးရလဒ် oriented ပညာရှင်များပေးကူညီပေးသည်။